Madaxda Khaliijka oo cadeeyay mowqifkooda ku aadan hadal kasoo yeeray Trump | Entertainment and News Site
Home » bulshada » News » Madaxda Khaliijka oo cadeeyay mowqifkooda ku aadan hadal kasoo yeeray Trump
Madaxda Khaliijka oo cadeeyay mowqifkooda ku aadan hadal kasoo yeeray Trump
daajis.com:- Dowladaha Khaliijka ayaa shaaciyay inay taageersan yihiin hadda saacado ka hor kasoo yeeray Madaxweynaha Mareykanka Trump ee ahaa in dowlada Qatar ay joojiso taageeridda Kooxaha argagixisada.
Dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka iyo xulafadeeda ayaa soo dhaweeyey go’aanka Trump ee ku aadan in la hakiyo dhaqaalaha ay Qadar ku bixineyso Argagixisada.
Dowladaha carabta ee u midoobay Qadar waxa ay sheegen in Trump ay ku raacsan yihiin xaqiiqda uu ka sheegay Qadar ee ah inay dacmiso Kooxaha kasoo horjeeda nabadda ka jirta Khaliijka.
Madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyey Qatar in ay “gacan weyn” siiso argagixisada. Haseyeeshee Qatar way beenisay eedaymahaa, waxaanay wasiirkeeda arimaha dibadda ugu dirtay socdaal uu ku soo marayo xarumaha Yurub si uu taageero ugu helo mawqifkeeda.
Xiisada ka dhex aloosan dowladaha Khaliijka ayaa waxaa sidoo kale ku kala jabay Dowlada Mareykanka waxaana xusid mudan in wasiirka arimaha dibadda Maraykanka uu si dadban ula safan yahay dowlada Qadar ee iminka la kulmeysa cadaadiska, halka Madaxweyne Trump uu la safan yahay dowlada Sacuudiga.
Dhinaca kale, Trump ayaa horay u sheegay inuu lahaa fekerka lagu soo bandhigay in Qadar ay taakuleyso Kooxaha Argagixisada.